Posted on August 17, 2020 by Author 2
https://drive.google.com/drive/folders/1BPk4SVG-K2yaCBb8rzvhuOl2c-d2YDu6?usp=sharing ... Read More | Share it now!
Posted on August 17, 2020 August 17, 2020 by Author 2
https://drive.google.com/file/d/1s8f6Teq2kXyOBKqRjnNZb8qSBgnPuErc/view?usp=sharing ... Read More | Share it now!
Posted on August 7, 2020 August 7, 2020 by Author 2
ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ Video Conferencing on Hospital Preparedness for COVID-19 ကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကုသရေး) ဒေါက်တာမိုးခိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ အဆိုပါ Video Conferencing တွင် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ က ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၏... Read More | Share it now!
Posted on June 29, 2020 June 29, 2020 by Author 2
ကျန်းမာ‌ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ Online training on SARI Treatment for Medical Officers in the COVID-19 frontline ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၂၉)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တစ်ရက်လျှင် တစ်နာရီခွဲ၊ တစ်ပတ်လျှင် (၂)ရက် နှုန်းဖြင့် သင်တန်းချိန် (၈)ချိန် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် WHO Regional Office for South-East Asia မှ ကျွမ်းကျင်သူ ဆေးပညာရှင်များက သင်တန်းဆရာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်မှ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး(ဆေးပညာ) ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်လင်းအောင်၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ဆေးရုံကြီးမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဆေးပညာ) ဒေါက်တာဟိန်းရာဇာအောင်၊... Read More | Share it now!
မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများနှင့် တိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် ဆောင်ရွက်မည့် အခြေခံကျ သည့် မရှိမဖြစ် ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Standard Operating Procedure (SOP) နှင့် Guidelines များ တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Video Conferencing အနေဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ရာ တည်းဖြတ် ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း) ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြင့်ဟန်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ဘာသာရပ်အလိုက် ပါမောက္ခ/ဌာနမှူးများ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးစီမံကိန်း... Read More | Share it now!